စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံတွေနဲ့ အိန္ဒိယ မှုခင်းရုပ်ရှင် (၃) ကား - For her Myanmar
စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံတွေနဲ့ အိန္ဒိယ မှုခင်းရုပ်ရှင် (၃) ကား
ကဲ.. ကဲ… ဘာလုပ်နေတာလဲ သွားဒေါင်းကြတော့လေ.. 😛
ခုနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်း ဂျင်းကားတွေများပါတယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေသုံးပြီး ပေါမှန်းမသိ ပေါသွားတဲ့ကားတွေကို မနည်းလှဘူးပေါ့… ဒါပေမဲ့ ကားတိုင်းမကောင်းဘူးလို့လည်း ခြုံပြောလို့ မရပြန်ပါဘူး… တကယ်ကို ယုတ္တိကျကျနဲ့ rating ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟောလိဝုဒ်မှာ မှုခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Rating ကောင်းဖို့ဆိုတာ အတော်ကို ရှားပါးတဲ့ အနေအထားပေါ့… ဆိုပေမဲ့လည်း အခုအက်ဒမင်ပြောပြပေးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကတော့ rating ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ယောင်းတို့ စိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေဖြစ်လို့ အချိန်ရရင် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
၁။ Ratsasan (IMDb 8.9/10)
အချိန်တွေ ဝှစ်ခနဲ ဘယ်လိုတောင် ကုန်သွားလဲ မသိဘူး လို့ ဒီကားကြည့်ရင်း တွေးမိကြပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ…. spoiler မထိတထိပြောရမယ်ဆို သက်တူရွယ်တူ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေ ပျောက်ဆုံးရာကစတာပါ။ ချန်နိုင်းမြို့မှာ ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုက ပွက်လောရိုက်နေပြီး ရဲတွေလည်း ခေါင်းစားနေပါပြီ။
ဒီအမှုကို အကွက်ကျကျဖြေရှင်းမယ့်သူကတော့ အက်ဒမင့်ခရပ်ရ်ှပါ..အဲလေ..စိတ္တဇကွင်းဆက်လူသတ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရေဇီ အာရွန်းပါပဲ။ ထုတ်လုပ်သူတွေဆီကနေ အငြင်းခံရပေါင်းများတဲ့နောက်ပိုင်း မိသားစုရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ယောက်ဖဖြစ်သူ ရဲအရာရှိရဲ့အကူအညီနဲ့ ရဲသားတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
နဂိုတည်းက ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေ၊ မှုခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းတတ်တာကြောင့် ရဲအုပ်ကြီးတွေတောင် ခေါင်းစားရတဲ့အမှုကို အာရွန်းတစ်ယောက် အကွက်ကျကျ စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲ?
ဘာကြောင့် သက်တူရွယ်တူမိန်းကလေးတွေကိုပဲ ရွေးသတ်သလဲ?
ဆိုတာတွေကို ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင် ရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခံစားကြည့်ရှုပါဦး။
၂။ Imaikkaa Nodigal (IMDb 7.4/10)
Ratsasan နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြာချိန်ချင်း တူတာတောင် ဒီကားက ပိုရှည်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ Ratsasan လောက် သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလို့ ဆိုရမှာပါ။
CBI အရာရှိ အန်ဂျလီဟာ ရုဒရားဆိုတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ၅နှစ်ကြာတဲ့အခါ ထပ်ပြီး ရုဒရားနာမည်နဲ့ လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အရင်ကရုဒရာအတိုင်းပဲ လူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတယ်၊ ရူပီးသန်း၂၀ငွေညစ်တယ်၊ ပိုက်ဆံရတာနဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့လူကို အရှင်မထားဘဲ သတ်ပြီး မိဘတွေဆီ ပြန်ပို့တယ်။
အန်ဂျလီအနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲလှည့်ကွက်တွေသုံးသုံး ဉာဏ်များတဲ့လူသတ်သမားကြောင့် ဘယ်လိုမှမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ ကောင်မလေးနဲ့ပြတ်ပြီး အသည်းကွဲနေတဲ့ အန်ဂျလီရဲ့မောင်လေး ဆရာဝန်အာဂျွန်းကလည်း သူ့ကောင်မလေးကို ပြန်သွားတွေ့ရင်း ဒီလူသတ်သမားရဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲမှာ ဒုက္ခရောက်ရသေး။
အန်ဂျလီသတ်လိုက်တဲ့ရုဒရားနဲ့ အခုပေါ်လာတဲ့ရုဒရားနဲ့က တူတူပဲလား?
နောက်ဆုံးလူသတ်သမားကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော်။
၃။ U Turn (IMDb 7/10)
ဒီကားလည်း အစပိုင်းခပ်အေးအေးနဲ့ နောက်ပိုင်းဇာတ်ရှိန်မြင့်ပြီး ရင်တဒိတ်ဒိတ် ဖြစ်နေစေမယ့်ရုပ်ရှင်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအစလေးတော့ ပြောပြမယ်နော်… ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတွေ ဘာတွေ ပြောပြလိုက်ရင်တော့ ကြည့်ရတာ ပေါ့သွားမှာစိုးလို့ပါ ယောင်းတို့ရေ…
ရာချာနားဆိုတဲ့ သတင်းထောက်မလေး တစ်ယောက်က သူရုံးသွား၊ ရုံးပြန် ဖြတ်နေတဲ့ ကုန်းကျော်တံတားတစ်ခုမှာ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်နေတဲ့ သူတွေကို အင်တာဗျူးချင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကုန်းတံတားပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့ သူတောင်းစာအဘိုးအိုအကူအညီနဲ့ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့သွားတဲ့ သူတွေရဲ့ ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ကို မှတ်၊ လိပ်စာကို စုံစမ်းပြီး သူ့မှတ်စုထဲ ရေးမှတ်ထားပါတယ်။ ပထမဆုံး ဆွန်ဒါဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီကို အင်တာဗျူးဖို့သွားပါတယ်။ တံခါးခေါက်ပြီး ဘယ်သူမှ ထွက်မလာတာကြောင့် လက်လျှော့လာခဲ့ရပါတယ်။
ကံမကောင်းချင်တော့ သူထွက်သွားပြီး မကြာခင်လေးမှာ ဆွန်ဒါရဲ့ အလောင်းကို အိမ်ထဲမှာ ရှာတွေ့တာပါပဲ။ ရဲတွေကလည်း ရာချာနားကို မသင်္ကာမှုတွေနဲ့ စုံစမ်းတဲ့အခါ ရာချာနား မှတ်စုထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့လူတိုင်း သေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ နာယာ့ခ်ဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိကလည်း ဒီမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သည်းသည်းမည်းမည်း စုံစမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့….
ကဲ..ကဲ..အက်ဒမင်လည်း ကြည့်ကောင်းမယ့် ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ ဖောက်သည်ချပေးလိုက်ပြီမို့ ယောင်းတို့လည်း ယောင်းတို့ ကြည့်ဖူးပြီးသား မှုခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့နော်။ ဒီကားတွေရဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုးတွေကို ဘယ်က ဒေါင်းကြည့်ရမလဲဆိုတာ သိတယ်ဟုတ်? 😛
ကဲ.. ကဲ… ဘာလုပျနတောလဲ သှားဒေါငျးကွတော့လေ.. 😛
ခုနောကျပိုငျး အိန်ဒိယရုပျရှငျကားတှမှောလညျး ဂငျြးကားတှမြေားပါတယျ။ နာမညျကွီးမငျးသားတှသေုံးပွီး ပေါမှနျးမသိ ပေါသှားတဲ့ကားတှကေို မနညျးလှဘူးပေါ့… ဒါပမေဲ့ ကားတိုငျးမကောငျးဘူးလို့လညျး ခွုံပွောလို့ မရပွနျပါဘူး… တကယျကို ယုတ်တိကကြနြဲ့ rating ကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ဟောလိဝုဒျမှာ မှုခငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး Rating ကောငျးဖို့ဆိုတာ အတျောကို ရှားပါးတဲ့ အနအေထားပေါ့… ဆိုပမေဲ့လညျး အခုအကျဒမငျပွောပွပေးမယျ့ ရုပျရှငျကားလေးတှကေတော့ rating ကောငျးကောငျးလေးနဲ့ ယောငျးတို့ စိတျဝငျစားနိုငျလောကျမယျ့ ရုပျရှငျကားလေးတှဖွေဈလို့ အခြိနျရရငျ ကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါရစေ။
အခြိနျတှေ ဝှဈခနဲ ဘယျလိုတောငျ ကုနျသှားလဲ မသိဘူး လို့ ဒီကားကွညျ့ရငျး တှေးမိကွပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ…. spoiler မထိတထိပွောရမယျဆို သကျတူရှယျတူ ကြောငျးသူ မိနျးကလေးတှေ ပြောကျဆုံးရာကစတာပါ။ ခနျြနိုငျးမွို့မှာ ဒီကှငျးဆကျလူသတျမှုက ပှကျလောရိုကျနပွေီး ရဲတှလေညျး ခေါငျးစားနပေါပွီ။
ဒီအမှုကို အကှကျကကြဖြွရှေငျးမယျ့သူကတော့ အကျဒမငျ့ခရပျရျှပါ..အဲလေ..စိတ်တဇကှငျးဆကျလူသတျသမားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရုပျရှငျရိုကျခငျြနတေဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရဇေီ အာရှနျးပါပဲ။ ထုတျလုပျသူတှဆေီကနေ အငွငျးခံရပေါငျးမြားတဲ့နောကျပိုငျး မိသားစုရဲ့တိုကျတှနျးမှုကွောငျ့ ယောကျဖဖွဈသူ ရဲအရာရှိရဲ့အကူအညီနဲ့ ရဲသားတဈယောကျ ဖွဈလာပါတော့တယျ။
နဂိုတညျးက ကှငျးဆကျလူသတျမှုတှေ၊ မှုခငျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး စူးစမျးတတျတာကွောငျ့ ရဲအုပျကွီးတှတေောငျ ခေါငျးစားရတဲ့အမှုကို အာရှနျးတဈယောကျ အကှကျကကြ စစေ့စေ့ပျစပျနဲ့ ဘယျလိုဖျောထုတျမလဲ?
ဘာကွောငျ့ သကျတူရှယျတူမိနျးကလေးတှကေိုပဲ ရှေးသတျသလဲ?
ဆိုတာတှကေို ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျ ရငျတဒိတျဒိတျနဲ့ခံစားကွညျ့ရှုပါဦး။
Ratsasan နဲ့ ရုပျရှငျကွာခြိနျခငျြး တူတာတောငျ ဒီကားက ပိုရှညျနသေလို ခံစားရပါတယျ။ Ratsasan လောကျ သိပျမကွိုကျပမေဲ့လညျး ဇာတျလမျးလှညျ့ကှကျတှနေဲ့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျတဈကားလို့ ဆိုရမှာပါ။
CBI အရာရှိ အနျဂလြီဟာ ရုဒရားဆိုတဲ့ ကှငျးဆကျလူသတျသမားကို ဖမျးဆီးပဈခတျပွီးတဲ့ နောကျပိုငျး ၅နှဈကွာတဲ့အခါ ထပျပွီး ရုဒရားနာမညျနဲ့ လူသတျမှုတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ အရငျကရုဒရာအတိုငျးပဲ လူတှကေိုပွနျပေးဆှဲတယျ၊ ရူပီးသနျး၂၀ငှညေဈတယျ၊ ပိုကျဆံရတာနဲ့ ပွနျပေးဆှဲခံရတဲ့လူကို အရှငျမထားဘဲ သတျပွီး မိဘတှဆေီ ပွနျပို့တယျ။
အနျဂလြီအနနေဲ့ ဘယျလိုပဲလှညျ့ကှကျတှသေုံးသုံး ဉာဏျမြားတဲ့လူသတျသမားကွောငျ့ ဘယျလိုမှမဖျောထုတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒီကွားထဲ ကောငျမလေးနဲ့ပွတျပွီး အသညျးကှဲနတေဲ့ အနျဂလြီရဲ့မောငျလေး ဆရာဝနျအာဂြှနျးကလညျး သူ့ကောငျမလေးကို ပွနျသှားတှရေ့ငျး ဒီလူသတျသမားရဲ့ လှညျ့ကှကျတှထေဲမှာ ဒုက်ခရောကျရသေး။
အနျဂလြီသတျလိုကျတဲ့ရုဒရားနဲ့ အခုပျေါလာတဲ့ရုဒရားနဲ့က တူတူပဲလား?
နောကျဆုံးလူသတျသမားကို ဘယျလိုစဈဆေးဖျောထုတျမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတျကားထဲမှာပဲ ကွညျ့လိုကျတော့နျော။
ဒီကားလညျး အစပိုငျးခပျအေးအေးနဲ့ နောကျပိုငျးဇာတျရှိနျမွငျ့ပွီး ရငျတဒိတျဒိတျ ဖွဈနစေမေယျ့ရုပျရှငျကားပါ။ ဇာတျလမျးအစလေးတော့ ပွောပွမယျနျော… ဇာတျလမျးအမြိုးအစားတှေ ဘာတှေ ပွောပွလိုကျရငျတော့ ကွညျ့ရတာ ပေါ့သှားမှာစိုးလို့ပါ ယောငျးတို့ရေ…
ရာခြာနားဆိုတဲ့ သတငျးထောကျမလေး တဈယောကျက သူရုံးသှား၊ ရုံးပွနျ ဖွတျနတေဲ့ ကုနျးကြျောတံတားတဈခုမှာ ယာဉျစညျးကမျး၊ လမျးစညျးကမျး ဖောကျဖကျြနတေဲ့ သူတှကေို အငျတာဗြူးခငျြနတောပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကုနျးတံတားပျေါမှာ အိပျနတေဲ့ သူတောငျးစာအဘိုးအိုအကူအညီနဲ့ ဂငယျကှကှေ့သှေ့ားတဲ့ သူတှရေဲ့ ဆိုငျကယျနံပါတျကို မှတျ၊ လိပျစာကို စုံစမျးပွီး သူ့မှတျစုထဲ ရေးမှတျထားပါတယျ။ ပထမဆုံး ဆှနျဒါဆိုတဲ့ လူတဈယောကျဆီကို အငျတာဗြူးဖို့သှားပါတယျ။ တံခါးခေါကျပွီး ဘယျသူမှ ထှကျမလာတာကွောငျ့ လကျလြှော့လာခဲ့ရပါတယျ။
ကံမကောငျးခငျြတော့ သူထှကျသှားပွီး မကွာခငျလေးမှာ ဆှနျဒါရဲ့ အလောငျးကို အိမျထဲမှာ ရှာတှတေ့ာပါပဲ။ ရဲတှကေလညျး ရာခြာနားကို မသင်ျကာမှုတှနေဲ့ စုံစမျးတဲ့အခါ ရာခြာနား မှတျစုထဲမှာ မှတျထားတဲ့လူတိုငျး သပွေီးသားဖွဈနပေါတယျ။ နာယာ့ချဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိကလညျး ဒီမှုခငျးနဲ့ပတျသကျပွီး သညျးသညျးမညျးမညျး စုံစမျးပွီးတဲ့ နောကျပိုငျးမှာတော့….
ကဲ..ကဲ..အကျဒမငျလညျး ကွညျ့ကောငျးမယျ့ ရုပျရှငျကားလေးတှေ ဖောကျသညျခပြေးလိုကျပွီမို့ ယောငျးတို့လညျး ယောငျးတို့ ကွညျ့ဖူးပွီးသား မှုခငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတဲ့ရုပျရှငျကားလေးတှေ မြှဝပေေးခဲ့နျော။ ဒီကားတှရေဲ့ မွနျမာစာတနျးထိုးတှကေို ဘယျက ဒေါငျးကွညျ့ရမလဲဆိုတာ သိတယျဟုတျ? 😛
Tags: Bollywood, crime, india, Movie review, Thriller, Tollywood
Christina Rosy January 17, 2019